> Resource > Video > ASF Editor: Sida loo Edit ASF Video Files
ASF, sidoo kale loo yaqaan Systems Advanced Qaabka, waa qaab file Microsoft in uu isticmaalo si encode video digital. Si kastaba ha ahaatee, waxaad heli kartaa in qalab badan oo video tafatirka ma taageeri noocan oo kale ah ee qaab. Taasi waa in la yidhaahdo, waxaad u baahan tahay si loogu badalo ASF in qaab kale oo ka hor tafatirka. Waxay u egtahay adag? Waa hagaag, halkan barnaamij awood video tafatirka Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxaa lagu soo bandhigay in aad si toos ah xaalkaa ASF aan diinta. Ma danaynaysaa? Hadda hubi caaradda hoose si aad u aragto sida ay u xaalkaa ASF la.
1 Import ASF video barnaamijka
Si aad u bilaabaan shaqada ASF video tafatir ah, doortaan muuqa u dhexeeya 4: 3 iyo 16: 9. Markaas riix "Import" button ku darto videos ASF iyo sidoo kale sawirada iyo files audio oo ay la socdaan videos in ay guddiga ugu weyn. Waxa kale oo aad si toos ah u soo jiidi kartaa & iyaga hoos u barnaamijka.
2 Codso kala guurka iyo saamaynta in xaalkaa ASF
Jiid oo hoos u videos ASF ah, sawirada iyo files audio in waqtiyada u dhiganta aagga tafatir ah. Double guji files ku Timeline ah, waxaad noola, isku shaandheyn, bedelkeeda dhigay / Saturation / nuur dhalaalaya oo degdeg ah / mooshin gaabis ah sida aad jeceshahay. Ama si fudud u kala qaybsan iyo jar ASF video by dhaqaaqin slidebar in ay xaq u tagay ama in ay ka qeyb rabin saarto.
Markaas riix "guurka" iyo badhamada "Saamaynta" si gooni gooni ah uu ka soo xusho tiro balaadhan oo ah saamaynta la yaab leh in lagu daro in aad ASF video. Si ay iyaga ugu dalban, kaliya jiidi guurka ama saamayn aad u baahan tahay iyo hoos on waqtiga.
Si aad ku dari Cinwaan ah ee video ASF ah, si fudud u riix "Text" badhanka si ay u doortaan qaab. Markaasaa waxaa u jiidin waqtiga, click double in ay galaan erayada ama u beddel font, midabka, baaxadda iyo booska sida aad jeceshahay.
Ka sokow waxa kor ku xusan, waxa kale oo aad ku dari kartaa logo in video, dalban sawir-in-sawir saamayn, isbedel wajiga, ECT.
3 Save ASF ka saxar ah
Ka dib markii sixiddiisa ASF oo dhan arrimood, aad tallaabada final - badbaadin ASF. Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxay bixisaa wax soo saarka afar siyood oo aad ku doorato:
Haddii aad rabto in aad si loogu badalo ASF video in qaab kale, riix "qaabab" tab u badbaadin qaabab kala duwan sida.
Haddii aad rabto in aad daawato ASF ah video saxar ku saabsan qalabka warbaahinta la qaadi karo sida iPod, iPhone, iwm, waxaad tagtaan dalka "Device" tab iyo dooran ka daraasiin saarka profiles horena.
Haddii aad u baahan tahay si ay u gubaan ASF ka saxar in DVD, doortaan "DVD" tab sida habka wax soo saarka.
Haddii aad rabto in aad isla wadaagno video online saxar ah, tag "YouTube" tab si ay u geliyaan in YouTube ama Facebook.